तपाईंको बुझाउनुहोस् Martech Zone लेख | Martech Zone
तपाईंको बुझाउनुहोस् Martech Zone लेख
कृपया नसोध्नुहोस् यदि तपाईं एक लेख पेश गर्न सक्नुहुन्छ, मात्र लेख यहाँ पेश गर्नुहोस्। अनुरोधहरू समीक्षा गर्न मसँग समय छैन।
मसँग तपाइँको ब्रान्डको पहुँच अधिकतम बनाउन पनि भुक्तान गरिएको प्याकेज छ:
यदि तपाइँको लक्ष्य छ ब्याकलिinking्ककृपया दूर जानुहोस्।
यो मार्केटिंग टेक्नोलोजी सम्बन्धित हुनुपर्दछ। कर्पोरेट समाचार, पदोन्नतीहरू, वा लगानी होईन
कल्पना: s०० देखि २,००० शब्दहरू, समस्या वर्णन गर्नुहोस्, समस्या समाधान गर्नका लागि उत्तम अभ्यासहरू, र तपाईंको समाधानको एक सिंहावलोकन। लिंक समावेश गर्नुहोस् जहाँ कसैले अर्को चरण लिन सक्छन् - एक डेमो, एक डाउनलोड, आदि।
स्क्रिनशट, रेखाचित्र, लोगो, र भिडियो सबै अत्यधिक सिफारिश गरिएको छ (कम से कम एक)।
कम्पनी भित्र संस्थापक वा विचार नेताको उद्धरण एक उत्तम स्पर्श हो।
एक प्रयोग केस वा ग्राहक कहानी अविश्वसनीय शक्तिशाली छ।
यदि तपाइँ लेखक हुन चाहानुहुन्छ भने, हामीसँग हुनु पर्छ लेखकको लागि मान्य ईमेल ठेगाना (PR फर्म होईन) र ती फोटोमा दर्ता हुनुपर्दछ Gravatar वा फोटो समावेश छ।
तपाइँ डेमो, डाउनलोड, आदि को लागी तपाइँको साइट मा फिर्ता कार्यमा कल समावेश गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। हामीलाई मात्र थाहा दिनुहोस्।
यदि तपाइँ एक उपकरण एकीकृत गर्न चाहानुहुन्छ, हामीलाई भन्नुहोस्। हामीसँग ती कम्पनीहरूसँग रेफरल सम्झौताको धेरै उपकरणहरू छन्।
यहाँ हामीले काम गरेका ठोस उदाहरणहरू छन् ऐन-अन सफ्टवेयर.
हामी सामग्री सम्पादन गर्न, फर्म्याट गर्न, यसलाई हटाउन, यसलाई अपडेट गर्न, पुनःनिर्देशित गर्न, वा यसका साथ अन्य केहि गर्न हामी स्वतन्त्र छौं हामी आफ्ना पाठकहरूको लागि गुणस्तरीय प्रकाशन कायम राख्न सुनिश्चित गर्न।
MM स्ल्याश DD स्ल्याश YYYY
तपाईंले बुझाउनु अघि*
यो फारम पेश गरेर, तपाईं निम्नका सबैमा सहमत हुनुहुन्छ।
मलाई ब्याकलिks्कहरू राख्न वा खोज श्रेणीकरण सुधार गर्न भुक्तान भइरहेको छैन
म एक वास्तविक व्यक्ति द्वारा लिखित मौलिक सामग्री बुझाउँदै छु
म यो सामग्री बुझाउँछु कि यो सम्पादन गर्न वा हटाउन सकिन्छ कुनै पनि समयमा मेरो अनुमति बिना
म बुझ्दछु कि लेख प्रकाशित हुने ग्यारेन्टी छैन वा प्रकाशनका लागि समयरेखा छ
कम्पनी, उत्पादन वा सेवा*
के तपाईं वास्तविक लेख सहित?*
सबै लेखहरू १००% मौलिक हुनुपर्दछ र कुनै अन्य साइटमा पोष्ट गरिएको छैन। तपाईले लेखकको नाम, इ-मेल ठेगाना, र हेडशट समावेश गर्नु पर्छ।
होईन - यो अनुरोध सम्भावित रूपमा मेटिनेछ।
हो - तपाईले अनुरोध गर्नु भएको सबै चीज मैले संलग्न गरेको छु।
हो - तर हामी चाहन्छौं Douglas Karr लेखक हुन
लेखक ईमेल ठेगाना
लेखकको लाइफलाईन लेखकको सीधा ईमेल ठेगाना बिना स्वीकार गरिने छैन। कुनै अपवाद छैन।
२ देखि sentences वटा वाक्य।
हेडशटहरू, स्क्रीनशटहरू र / वा कागजात
स्वीकारिएका फाईल प्रकारहरू: jpg, gif, png, कागजात, zip, docx, अधिकतम। फाईल आकार: MB० MB
कुनै पनि बाइलाइन लेखहरूले वास्तविक नाम, लेखकको लागि सीधा ईमेल ठेगाना, हेडशट, र २ देखि sentence वाक्यांश बायोग्राफी चाहिन्छ। हामी कुनै पनि सामाजिक प्रोफाइल ठेगानाहरू समावेश गर्न सक्छौं। कृपया zip र अपलोड गर्नुहोस्।
तपाईंसँग अफर वा कल-टु-एक्शन छ?*
यदि तपाइँ तपाइँको लेख मा एक प्रस्ताव प्रदान, तपाइँ एक राम्रो प्रतिक्रिया प्राप्त छ। जस्तै कोड MARTECHZONE १०% छुटको लागि प्रयोग गर्नुहोस्। कृपया गन्तव्य लिंक प्रदान गर्नुहोस्।
यदि तपाईंसँग एउटा सम्बद्ध कार्यक्रम छ भने हामी सहभागी हुन सक्दछौं, हामी यो प्रकाशित हुन सक्दछौं।
जब तपाईं यहाँ हुनुहुन्छ ...
के तपाईं हाम्रो न्यूजलेटरको सदस्यता लिन चाहानुहुन्छ?
प्रविष्टि सम्पादन गर्नुहोस्